२२२ मिलियन युरोमा नेइमार अनुबन्ध, विश्वमा के–के हुन सक्छ त्यति रकमले ? « Pana Khabar
के–के हुन सक्छ त्यति रकमले ?
– नेपाल वायु सेवा निगमले २६ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइड बडी विमान ल्याउने भएको छ । यो रकम नेइमारले पिएसजी क्लबसँग गरेको अनुबन्ध सम्झौता बराबर नै हो ।
– नेयमारले पाएको भन्दा कम रकम अर्थात २०७ मिलियन युरोमा बहामासमा ४ वटा नीजि द्वीप खरिद गर्न सकिन्छ ।
– २०८ मिलियन युरो रकममा १२ वटा प्राइभेट जेट विमान खरिद गर्न सकिन्छ । यो रकम पनि नेयमारले पाएकोभन्दा कम नै हो ।
– नेइमारले प्राप्त गर्ने रकमले बेलायतको राम्रो लोकेसनमा औसत मूल्यका ८ सय ४५ घर खरिद गर्न सकिन्छ ।
– १० हजार वर्षका लागि उत्कृष्ट होटलमा खाजा–बस्न तिर्ने रकम पुग्छ ।
– २०२ मिलियन युरोबाट तीन सिजनसम्म नाउ क्याम्प रंगशालाका सबै सिट बुक गर्न सकिन्छ । (एजेन्सी)
प्रकाशित :साउन २० शुक्रबार-२०७४
रोनाल्डिन्होले गरे सन्यासको घोषणा
हवाईजहाजमा जाने पैसा नभएपछि विश्वकप खेल्ने नेपाली टोली रेलबाटै पाकिस्तान जाँदै !
रोनाल्डोको ठाउँ अब नेइमारले लिने, नेइमार रियल मड्रिड जाने पक्का
बार्सिलोनासँग हारेपछि रियल म्याड्रिडका प्रशिक्षक जिदानले भने -हारको जिम्मेवारी लिन्छु